အ.ထ.က(၂)စမ်းချောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Sanchaung2High School
အ.ထ.က. (၂) စမ်းချောင်း
၂၉၁၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်
အမှတ် (၂) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ စမ်းချောင်း သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်လမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ စိန့်ဖလော်မီးနား (St. Philomena's High School) ကျောင်းဟူ၍ နာမည်တွင်ခဲ့သည်။ သူငယ်တန်းမှ ဒသမတန်း အထိ ပညာသင်ကြားနိုင်သည်။ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် နှင့် ဆုကဗျာ  သည် အ.ထ.က(၂)စမ်းချောင်း ကျောင်းသူဟောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။
စမ်းချောင်း (၂) သည် ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊  ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်  တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတို့တွင် ပထမ ရရှိခဲ့ပါသည်။
↑ ပန်းကောင်းပွင့်သည့် စမ်းချောင်း (၂)
↑ Yu Lwin Soe (2009-12-04). "Interview with Ma Htut Myatno Aung" (in Burmese). Weekly Eleven Media.
↑ "'တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေးပွဲ၌ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူ မခိုင်ခိုင်လွင်ကျော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း' ၊ 'ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်ရောက် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်ဒေသ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင် လူငယ်တွေ လုပ်သွားရမယ်'" (in Burmese) (2010-09-19). Weekly Eleven Media.
↑ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး (သင်ကြား) ဒေါ်ဆွေဆွေလဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
↑ ဆရာမတို့ရဲ့ ကျောင်းကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို ၂၂၄ ယောက် ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ၂၁၅ ယောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၉၅ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း အောင်ချက် အကောင်းဆုံး အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း ပထမဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အ.ထ.က(၂)စမ်းချောင်း&oldid=520662" မှ ရယူရန်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၅:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။